Baadigoobka loogu jiro ragga Shiinaha u dhashay oo ka badbaaday markabkii Titanic | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Baadigoobka loogu jiro ragga Shiinaha u dhashay oo ka badbaaday markabkii Titanic
Baadigoobka loogu jiro ragga Shiinaha u dhashay oo ka badbaaday markabkii Titanic
Muddo 24 saacadood gudahood, markii ay yimaadeen xarunta socdaalka ee Ellis Island, New York, waxaa laga cayriyay dalka, sababo la xiriiray Sharciga Ka Saaridda Shiinaha, oo ahaa sharci dood dhaliyay kaas oo mamnuucayay in muhaajiriinta Shiineeska ah ay galaan Mareykanka.
“Maaddaama ay ahaayeen koox isla socotay, lama aqoon,” Arthur Jones, oo ah filim sameeye Britain u dhashay iyo agaasimaha filimka Lixda, ayaa sidaasi u sheegay BBC-da.
Warbaahinnada kale ayaa xilligaas ku eedeeyay ragga Shiinaha ahaa in ay ku lebisteen dharka haweenka si ay u helaan muhiimadda koowaad ee raacidda doonta badbaada.
Raggii kale ayaa si wadajir ah uga shaqeynayay Britain illaa sanadkii 1920, xilligaa oo UK ay ka soo kabaneysay dagaalka, muhaajiriin nacaybkana aad ayuu u sareeyay.
Mr Fang ayaa geeriyooday sannadkii 1985, wuxuuna jiray 90 sano. Keliya 20 sano kaddib geeridiisa, ayuu Fong, qof qoyskiisa ka mid ah ka ogaaday in aabihiis uu ka badbaaday markabkaas.
Isaga (Fang Lang) wuxuu ahaa nin fiican, illaa uu dareemay in lagu takooray isirkiisa,” ayuu yiri Fong.
“Sababtoo ah haddii aadan aqoon taariikhda, iyada ayaa isa soo celineysa,” ayuu yiri Fong.
Previous articleXiisad u Faransiiska iyo Islaamiyiinta Pakistan oo ka dhex taagan Dowlada iyo shacabka
Next articleShir looga hadlayay amniga Caasimada Galmudug ee Magaalada Dhuusamareeb oo u furmay Saraakiisha Ciidamada Qalabka Sida iyo Maamulka Dhuusamareeb.
Gudoomiyihii hore baarlamanka Federaalka Somalia Mudane Mohamed Osman Jawaari oo maanta la hadlay Idaacdaha Muqdisho ayaa sheegay in sharci daro iyo meelkadhac weyn ay...